दलान नेपाल : जब मनिष सुमनले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव माथी औला उठाए......
आइतवारको बैठकमा फोरम नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राम नरेश राय बोले पछि सदभावनाका महासचिव मनिष सुमनको बोल्ने मौका आयो । सुमनले बोल्नु अघि उपेन्द्र यादव र अन्य नेताहरुलाई तपाइृहरु कुरा सकिसक्यो भनेर प्रश्न गरेर आफना कुराहरु राख्न सूरु गरे । उनले औला मा बुदाहरु गत रुपमा औटा कुराहरु उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई सोधे । उनले पहिलो नम्बरमा भने, हाम्रो मोर्चाको एक जना शिर्ष नेता प्रहरीको कुटाइ वाट नराम्ररी धाइते भएको २४ घण्टा नाघि सकेको छ, अहिले सम्म क कसले फोन गरेर उहाको स्वास्थ वारेमा बुझनु भएको छ ? उनले औला तेर्साउदा तमलोपा अध्इष महन्थ ठाकुर फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलाई प्रश्न गर्नु भयो ? ठाकुरजी तपाइले अहिले सम्म फोन गर्नु भएको छ, उपेन्द्रजी तपाईले ? बैठकको माहौला अर्को भइसकेको थियो । सुमनले अन्य नेताहरुलाई पनि सोधे ? उपेन्द्र यादव र ठाकुरले आफुहरुले अहिले सम्म गर्न नसकेको स्विकार गरे । त्यसपछि सुमनले ३ पुषमा मधेशी मोर्चाले गरेको पत्रकार सम्मेलनको प्रसंग निकाले र तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर माथी ओला तेर्साउदै प्रशन गरे, तपाईले अस्ती ३ गते पत्रकार सम्मेलनमा आफुहरु अब मधेश झर्ने र वार्ता पनि मधेशमै गर्ने उदघोष गर्नु भएको थियो, त्यसको भोली पल्टै देखि काठमाडौ फेरी वार्ताहरु सहभागी हुनु हुन्छ, के यो नै हो मोर्चा निती ? सुमनले उपेन्द्र यादवको प्रसंग निकाल्दै महतोले कुन कार्यक्रम अन्र्तगत विरागनटर नाकामा धर्ना दिन पुगे भन्ने प्रसंग कोटयाउदै भने, तपाईहरुले मोर्चाको बैठक गरे आन्दोलनका सवै कार्यक्रमहरु गप सशक्क्त बनाउने निर्णय गनू हुन्छ अनि महतोजी कुन कार्यक्रम अन्र्तगत त्याहा गयो भनेर प्रश्न गर्ने ? सुमनले यती प्रश्नहरु औला तेर्साएर प्रश्नहरु राख्न थाले पछि उपेन्द्र यादव सुमनलाई आफुले त्यस्तो नभनेको भन्दै सम्झाउन प्रयासमा लागे । त्यसपछि तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले पनि सुमनले उठाएका कुराहरु जायज भएको भन्दै वातावरण मिलाउने तिर लागे ।
त्यस पछि तमलोपा नेताहरु हृदेश त्रिपाठी र वृषेश चन्द्र लालले सुमनलाई वित्रिप्ति बनाउन आग्रह गरे । जसमा उपेन्द्र यादवले आफुले एउटा विज्ञप्ति बनाउन लगाएको भन्दै आफनो प्रेस हेर्ने महेशलाई वोलाएर उक्त विज्ञप्ति सवैलाई हेर्न लगाए । यादवले बनाएको विज्ञप्ति माथी सुमनले फेरी असन्तुष्टि व्यक्त गरे पछि त्रिपाठी र लालले त्यसलाई सच्याउने जिम्म सुमनलाई दिए । सुमनले त्यसमा समान्य हेरफेर गरेर विज्ञप्ति निकाले । जसमा सुमनले आफनो ते्स्रो भनाईको बुदामा राखेको प्रसंगलाई समेटे । उनले जव सम्म सरकारले महतो माथी भएको घटना मा माफी नमाने सरकारसंगको वार्तामा मोर्चा गए पनि त्यसमा सदभावना पार्टी सहभागी नहुने अडान राखे । साथै त्यसका लागी उक्त घटनाको छानविन हुनु पर्ने माग समेत गरियो ।
राजेन्द्र महतोलाई विशेष उपचार गराउने भन्दै दिल्ली लगियो ।
प्रहरीको आक्रमणवाट धाइते भएका सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाइ आज विशेष उपचार गराउनु पर्ने भन्दै भारतको दिल्ली लगिएको छ । महतोको व्लड प्रेसर र सुगरमा दिन प्रति दिन थप वढदै जादा उनलाई दिल्लीलगिएको हो । प्रहरीको आक्रमणमा उनको टाउको र खुटामा चोट लागेका थिए । विराटनगरमा उनको उपचार राम्ररी सम्भव नदेखिए पनि उनलाई धरान लगिएको थियो । तर धरानमा पनि उनले स्वास्थ्य अवस्था समान्य रुपमा नफर्के पछि उनलाई आज दिउसो दिल्ली लगिएको सदभावना पार्टीले जनाएको छ । आजै उनलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर धरान वाट काठमाडौ ल्याइएको थियो । दिउसो काठमाडौ वाट उनी विमान मार्फत दिल्ली गएका हुन ।
Madheshi morcha ka kehi netaharu ghamandi bhaye ko kaaran Andalon lambayae ko xa.
Sabai ko bichar ek chhaina.